Ifektri yezixhobo zoRhwebo | Abavelisi beeNkonzo zeNtengiso kunye neeNkonzo
Amacwecwe okubulala iintsholongwane angama-84 Amacwecwe angama-2000 Amacwecwe okuCoca kunye neZintsholongwane Iingubo zekhaya
Eli cwecwe le-84 libulala iintsholongwane linomxholo ophezulu wechlorine ekhoyo, uzinzo olulungileyo kunye nokunyibilika okuhle. Ithebhulethi inokuxutywa kwibhotile yamanzi ukuze ibe yibhotile ye-84 yokubulala iintsholongwane, efanelekileyo kwaye ekhawulezayo, kwaye inokucoca ngokupheleleyo imigangatho yeofisi, imigangatho yasekhaya, njl.
Into ebulala iintsholongwane kulwelo ekhayeni isetyenziswa kwimisebenzi emininzi yokubulala iintsholongwane
Esi sixhobo sokucoca ulwelo ngesandla esichasene ne-antibacterial sinomthamo wama-250 ml kunye nephakheji yecompact enokuthi ihanjiswe ijikelezwe. Ingabulala i-99.99% yeebhaktheriya. Iziva ithambile kwaye ishiya izandla zakho ziziva zihlaziyekile ngaphandle kokuncamathela okanye intsalela. Ingasetyenziswa eziofisini, kumagumbi okufundela, kwimizi-mveliso, emakhaya, ezikolweni, njl.
Izinto zokukhusela indalo esingqongileyo zePvc Iibhokisi zeBhokisi yoMngcwabo
Ingcaciso yeMveliso Igama leMveliso yokuNgcwaba Imveliso yoMzimba woMzimba oFileyo weMathiriyeli iPVP Isiphatho esiThandathu seZipper Uhlobo oluphakathi okanye u-U Uzper Type Size 220 * 90cm (Ubungakanani bunokwenziwa) Ukutyeba kwe-0.25mm, i-0.3mm Max Ukulayisha Ubunzima be-200kgs uphawu lokusiNgqongileyo. Umbala oMhlophe okanye oMnyama oPhezulu 1 i-pc / ibhegi, i-10bags / i-ctn yeSatifikethi se-CE (SGS)
Intsholongwane Isampulu Tube Isampulu Sterile Banokubulawa Virus Collection
Ingcaciso: ukuvuza: Ukutywinwa ngokupheleleyo, ngaphandle kokuvuza emva kokujija isiciko Ixesha lokuQinisekiswa: unyaka omnye Ukupakisha: Iphepha leplastiki elinamandla: Ukuzazisa kuthetha ± 10ml